आज सुनको मूल्य स्थिर, चाँदी फेरि बढ्यो ! कति पुग्यो तोलाको ? – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/आज सुनको मूल्य स्थिर, चाँदी फेरि बढ्यो ! कति पुग्यो तोलाको ?
आज सुनको मूल्य स्थिर, चाँदी फेरि बढ्यो ! कति पुग्यो तोलाको ?
आज साताको दोश्रो दिन (सोमबार) नेपाली बजारमा सुनको मूल्य स्थ‍िर छ । आइतबार तोलाको ७३ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन सोमबार त्यही मूल्यमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार तेजावी सुन तोलाको ७३ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आज चाँदीको मूल्य ५ रुपैयाँले बढेको छ । चाँदी तोलाको ८ सय ९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
-चौथोमा हरेक शुक्रबार माता लक्ष्मीको पुजा आरधना गर्नुपर्छ
मिस वर्ल्डमा नेपाली चेली अनुष्का श्रेष्ठले जितिन् यस्तो अवार्ड, सबै नेपालीलाई दिइन् बधाई अनि धन्यबाद !
सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रमका एक सदस्यलाई कोरोना संक्रमण
कमेडीमा पनि अगाडी पुण्य गौतम !
तयार भयो कोरोना भाइरसको औषधि , शुरुमा ४०० बिरामीलाई खुवाइदै !